Chikumi 13, 2018 arun
Binance anoronga kuvaka yebazi Channel Islands
Pashure ichangopfuura kuvaka muhofisi muna Marita, chikuru Exchange munyika nekutengeserana vhoriyamu, Binance, asarudza kuvhura imwe hofisi, nguva ino ari Channel Islands (Jersey chitsuwa, pakati UK uye France), achichipa yakawanda kuchinja kuti kushanda mukati UK uye misika European
"Global kuwedzera nzira… uyewo kuumba yakasimba operative hwaro kwedu kuwedzera muzororo Europe "Binance CEO Zhao Changpeng akati.
Rudzi rune zvakanaka zvakavanzika uye mutero tigozvarwa nemabhizimisi kuti vanoda kumisa nhoroondo dzavo dzemari ikoko. Binance achava kubhadhara 10% mutero pamusoro wayo mari.
Coinbase anotangazve crypto indekisi Fund
Crypto Zirume Coinbase vakazivisa kuti ayo cryptocurrency indekisi Fund, kutanga pachena March, zvino yakazaruka makambani ari US.
Kambani akati Blog mumhanyi kuti wakaona "kutikurira" kufarira kubva makambani, zvino ari kusvasvavirira kune avo vanoda mari pakati $250,000 uye $20 miriyoni. For ikozvino, Kambani akati, kutaurawo ari kungogumira U.S. uye vaya vari aizivikanwa zviri pamutemo vanoita.
Coinbase Index Fund anopa vanoita kuona zvakaparara dziri exchange, weighted ne musika capitalization.
Coinbase haana kutaura kuti zviri kushanda kuti vomurova dzimwe mari kuti vari "nyore makambani ose uye kufukidza rinobatanidza zvakawanda digitaalinen zvinhu" saka, kana uri kwete aizivikanwa zviri pamutemo U.S. investor, pangava nemikana kwamuri zvichienderana chii chinozoitika.
Trem anoedza Blockchain kuti kusarudza mafayawekisi uye digitaalinen IDs
Guta Trem, kumba Swiss Cryptotal, anokoka vagari vayo kuti ive experimental blockchain vhoti. Ivo vanotarisirwa kuchinjana maonero akasiyana nyaya omunzvimbo kukosha, kusanganisira mafayawekisi panguva yegore negore Lakeside Festival uye kushandisa digitaalinen pemipata kukwereta mabhuku uye kubhadhara mari yechikoro kupaka.
Kraken Daily Market Mushumo 12.06.2018
$197M nhumbi mhiri misika zvose nhasi